नछुने ! | Nagarik News - Nepal Republic Media
‘ए कान्छा, तेरी आमा नछुने भएकी छे । छोलास् नि लाडिदै गएर ।’ दलानबाट गोठतिर फर्किदै कान्छाकी बज्यै चिच्याइन् । कान्छो एसइई परीक्षाको तयारीमा थियो । आमा वविता मनभरि कुरा खेलाएर वस्तुभाउलाई घाँस हुत्याउँदै थिइन् । लोकले रजवती महिलालाई नछुने भनी गरेको सम्बोधन वििवतालाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । साथीहरू छाउगोठमा जान्थे । उनले घरको एउटा कुनामा थुप्रिन पाएकी थिइन् । ससुरा र श्रीमान् पनि हजुरआमाकै कुरामा सही थाप्थे । आँखा छलेर आमाछोरा भने अन्धविश्वास हटाउन सरसल्लाह गर्थे ।
अचानक नेपालमा कोरोना छिरयो । चीन, इटाली, स्पेन, इराक, अमेरिका जस्ता मुलुकको बेहाल सम्झिएर मान्छे तर्सिए । सरकारले लकडाउनको घोषणा गरयो । महामारीबाट जोगिने उपाय बतायो । घरभित्रै बस्नुपर्ने, हिँड्नै पर्दा दूरी कायम गरेर हिँड्ने, मान्छेले मान्छेलाई नछुने, आचारविचार र आहारमा ध्यान पुरयाउने, रुघाखोकी लागेका व्यक्तिबाट सजग रहने मास्क लगाएर मात्र कुराकानी गर्ने, साबुनपानीले हात धोइरहने कुरा समाचार बने । टिभी, रेडियो र पत्रपत्रिकाहरू कोरोनामय भए । कोरोना लागेका मान्छेले छोएका सामान नछुनेमा परे । महामारी कोरोनाको पहिलो नम्बरमा मान्छेलाई मान्छेले नछुने भने थियो । कान्छो कोरोनाकै कारण एसइईको परीक्षा सरेकाले बेलाबसत टिभी हेर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट पढाएका विषय सिक्ने, कोभिड–१९ बारे जानकारी लिने साहित्य पढ्ने, गीत, कविता, कथा लगायत चित्र कोर्ने, घरको रेखदेख र खाजा बनाउने प्रयासतिर मोडिन्थ्यो । कोरोनाको क्षतिले उसको दिमाग हल्लियो । उसले हजुरआमा र आमाको नछुने सम्झियो ।
आमाले हामीलाई किन नछुने ? के आमा कोरोना हो र भन्दै मनमनै जङ्गियो । ऊ जुरुक्क उठेर चुलाछेउ पुग्यो ।
‘ए हजुरआमा, संसारमा नछुने को हो ? ’ बूढी भएर अझै थाहा छैन । लौ हेर्नुहोस् मेरो मोबाइलमा ।’
इटालीमा राख्ने र गाड्ने ठाउँ नभएर सोत्तर लडाइएका लासले के भन्दा हुन् । होस् नपुरयाई कोरोनाजस्ता महामारी लागेका मान्छेले छोयो भने हजारौँहजार बिरामी हुन्छन् । संयोग परे बाँच्छन् नत्र मर्छन् । के मेरी आमालाई महामारी भएको छ ? ‘उसले आत्तिदै भन्यो– आमाहरू रजस्वला भएकैले मजस्ता जन्मिएका हुन् ।’ म यही विषय पढेर डाक्टर बन्छु । आइन्दा बुझ न सुझ कसैलाई प्याच्च भन्ने होइन । मेरी आमा नर्स हुन् । उनलाई नछुनेबारे जानकारी छ । तपाईहरू जस्ताले गर्दा। यसपटक हजुरआमा ट्वाँ परिन् ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७७ १२:४० आइतबार